GV Face: Mamaky Ny Fahanginan’i Pakistana Amin’ny Raharaha Balochistan · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 21 Avrily 2015 2:52 GMT
Vakio amin'ny teny Swahili, Български, Español, English
Tamin'ny herinandro lasa iny “noho ny fitsabahan'ny fanjakana“ dia voatery nanafoana fifanakalozan-kevitra iray momba ny zon'olombelona any Balochistan, faritany atsimo andrefana ao aminy, ny anjerimanontolo goavana iray tsy miankina ao Pakistana.
Hatramin'ny 1947, niaina ny hetsika fahadimy nitakiany fisintahana i Balochistan, ilay faritay midadasika indrindra ao Pakistana, vitsy mponina ary mahantra. Tsy fahita firy ny fifanakalozan-dresaka andraisan'ny dahole be anjara momba ny ady ao Balochistan. Heverin'ireo tia tanindrazana ho adidin'izy ireo amin'ny firenena ny fahanginana momba ny raharaha Balochistan, ny hafa indray manivan-tena noho ny tahotra ny herin'ny tafika ao Pakistana.
Nefa vitsy no tena mahatakatra ny zava-mitranga ao amin'ny faritany misy azy, satria manify dia manify ny fandrakofana sy tatitra ataon'ireo media avy any.
Ao anatin'ity fizaràna iray an'ny GV Face ity, potehintsika ny Fahanginana momba ny Balochistan amin'ny alàlan'ny firesahana amin'ireo mpikatroka mafàna fo Pakistane sy Baloch ary ireo mpanao gzety sahy miresaka sy mitatitra momba ny fanitsakitsahana ny zon'olombelona ao amin'io faritany io. Manitsaka tsipika saropady ireny mpikatroka mafàna fo sy mpanao gazety ireny. Hiaraka amintsika i Mir Mohammad Ali Talpur (@mmtalpur), tranainy tamin'ny fikatrohana ho fiarovana ny zon'olombelona ary anisan'ny tao anatin'ilay resadresaka LUMS nofoanana. Ho eo ihany koa i Fahad Desmukh (@desmukh), izay mitarika ny PakVoices, tranonkala iray vaovao mitatitra momba ireo vondrom-piarahamonina ao amin'ny faritra amontsirak'i Balochistan, Adnan Amir (@iadnanamir), izay mitarika ny famoahana ety anaty aterineto ny Balochistan Point, ary Ali Arqam (@aliarqam), mpikatroka mafàna fo ary mpanangona vaovao miaraka amin'ny gazetiboky Newsline.
Ny niandohan'ny tantara
Sarotra hamarinina ireo tena zava-nisy mikasika ny fifandonana ao Balochistan. Ny zavatra tena fantatsika dia ny hoe mikatsaka fahaleovantena avy amin'i Pakistana ireo Baloch tia tanindrazana, ary ny sampam-pitsikilovana mitam-piadiana avy ao Pakistana indray miezaka ny hamongotra azy ireny, indraindray amin'ny alàlan'ny “fampanjavonana an-terisetra” tsy mandalo fitsaràna. Araka ny ambaran'ny Kaomisiona momba ny Zon'Olombeona ao Pakistana, hatramin'ny 2010, hita faty nitondra mariky ny fiaretana fampijaliana ny vatana mangatsiakan'ireo “olona an-jatony nanjavona” tao Balochistan. Tamin'ny 2013 fotsiny, razana 116 no hita nanerana ny faritany, 87 tamin'ireo no voamarin'ny fianakaviany izay niampanga ireo sampam-pitsikilivoana avy ao Pakistana ho naka an-keriny ny havany.
Tazonin'ny governemanta ny filazany hoe “hery avy any ivelany” no manohana ireo mpitaky fisintahana ireo.
Ampiasain'ìreo milisy avy amin'ny sekta samihafa sy ny Islamika ihany koa ilay faritra mba hanangonana olona hofanina hiady amin'ny ady any Iran sy Afghanistan, izay samy miray sisintany amin'i Balochistan. Manao fanafihana ao anatin'i Pakistana ihany koa ireny vondrona ireny.
Indraindray ireny vondrona ireny no manambatra ny heriny noho ny tombontsoa ara-bola sy ara-pitaovana. Vokany, tsy maintsy ny vahoaka monina ao Balochistan ihany no miaro ny tenany amin'ireo fotokevitra ideolojika samihafa mampidi-doza ireo.
Hatramin'ny 2001, an'arivony amin'ireo foko Shia Hazaras, izay vitsy an'isa indrindra ao Balochistan, no maty novonoin'ireo vondrona milisy. Marobe no voatery niala ny faritany izay nantsoin-dry zareo hoe tanindrazany nandritry ny taranaka maro nifandimby.
Ezahan'ireo vondrona Baloch tia tanindrazana sasany ny hanosika ireo miaramila Pakistane sy tsy Baloch hivoaka ny faritany. Voadaroka baomba ireo fiaran'ny miaramila. Ireo fianakaviana Punjabi nonina tany Balochistan nandritry ny ampolo taona maro izao dia tondroin'ireo vondrona vitsivitsy ho toy ny “mpiavy mibodo tany” tsy misy misy ilàna azy, an-jatony no efa maty taminà fanafihana ary an'arivony no voatery nandositra ny herisetra.